Magnets NdFeB mifamatotra, China Mpanamboatra Magnet NdFeB mifamatotra, Mpamatsy, Factory - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Fiainana sy tantara
Haavo famerana, habe sy fandeferana
Fitsipiky ny fiarovana amin'ny fandidiana manual
Magnets mifamatotra NdFeB
Ny andriamby NdFeB mifamatotra dia novokarina tamin'ny famatorana vovoka NdFeB haingana. Ny vovo-tany dia afangaro amin'ny resina mba hananganana andriamby amin'ny famolavolana famatrarana miaraka amin'ny epoxy na famolavolana aretina amin'ny nylon. Ity teknika farany ity dia mandaitra manokana amin'ny famokarana volavola betsaka, na dia ambany kokoa noho ny vita amin'ny famolahana compression aza ny sandan'ny vatan'ireo vokatra noho ny hamaroany. Ny endrika samihafa amin'ny fahamendrehana avo lenta dia azo vokarina tsy misy fanodinana intsony. Ny ety ivelany dia tsaboina amin'ny epoxy coating na nickel-plating mba hisorohana ny fahasimbana
Miaraka amin'ny tahan'ny fampidirana isan-karazany amin'ny vovoka NdFeB, ny fananana andriamby an'ny andriamby NdFeB hybrid dia azo alefa amin'ny faritra maro. Raha vantany vao tafapetraka ny mari-pahaizana, dia mety mbola voafetra ao anaty banky tery ny fiovan'ny toetr'andro. Magnetsia hybrid dia hihaona amin'ny fananana voatondro an'ny mpanjifa.
Vovoka NdFeB novonoina haingana ho an'ny andriamby mifamatotra dia ny voamaina marobe miaraka amin'ny haben'ny voan'ny micronon. Ny vovoka dia isotropika amin'ny fananana andriamby, izay miteraka fitomboan'ny fisotroan-dronono sy ny fanerena intrinsika miaraka amin'ny saha ampiharina. Ny andriamby dia tsy azo ovaina afa-tsy amin'ny saturation amin'ny saha avo.
Tombony amin'ny andriamby mifamatotra
* Novokarina tamin'ny fahombiazana avo lenta ary azo averina.
* Ny andriamby sy ny ampahany hafa dia mety hiara-miforona amin'ny dingana iray.
* Safidio maimaimpoana ny torolàlana magnetizing-indrindra ho an'ny fampiharana polar multi-polar
* Fahamarinana avo lenta - fampiharana be dia be miaraka amin'ny milina paositra farany ambany.
* Vatosoa rindrina manify sy andriamby endrika sarotra.
* Fanoherana avo lenta.
Magnets NdFeB mifamatotra (tsindrona miorina)
Fananana andriamby mahazatra
Grade Max. Vokatra angovo Remanence Herim-pamoretana Rev. Coeff. Miasa Temp. hakitroky
MGOe Prot / m3 T kOe Ka / m kOe Ka / m % / ° C % / ° C ° C g / cm3
Magnets NdFeB mifamatotra (Compression Bonded)
Grade Max. Vokatra angovo Remanence Herim-pamoretana Rev. Miasa Temp. hakitroky
BNP-8H 6.0-9.0 48-72 0.55-0.62 5.0-6.0 400-480 12 May Day 16 960-1280 -0.07 -0.4 120 5.6-6.0
Ampio: No.277 Yinpen South Road, Changsha, PR China
E-mail: [email voaaro]
Mpitantana varotra: [email voaaro]
Copy Copy © 1996-2022 Qiangsheng Magnets Co., Ltd Zo rehetra voatokana